Buugga Jidka Nabadda wuxuu qoraagu si qoto dheer oo cilmiyeysan ugaga faallooday farqiga u dhexeeya qabiilka iyo qabyaaladda, waxaan odhan karaa wuxuu qoraagu daaha ka qaaday xaqiiq dhab ah oo aan hore loo fahmin. Wuxuu si geesinimo leh ugu badheedhay inuu ku dhiirrado kala soocidda qabiilka iyo qabyaaladda oo dadka badankiisa iskaga murugsan. Wuxu ku dadaalay inuu soo bandhigo aragti cusub oo dadka ku hagaysa dariiqa dhabta ah. Waxa kale oo uu si garasho ku dheehan tahay u sharxay qaybaha qabyaaladda iyo waxa qabyaaladi tahay, isagoo ku dadaalay inuu geed ku xidho isla markaana fanteeyo waxa qabyaaladda loo yaqaan. Wuxu qoraagu qabyaaladda ku tilmaamay cudur aanay keenin deris-ku-noolka bukaan keentada ahi.
Akhriste - 2007-01-09 02:54:18
ahmed caato - ahmedyuusuf1@hotmail.com
waxaan rabaa innaan ka qayb qaato buugga
Akhriste - 2006-12-16 00:29:06
idiris Muuse - cutemmaner@yahoo.com
buugani waa buug qiimo wayn leh wax weyna u tari doona bulshada.